Actress Koo Hye-sun - video.phpmyanmar.com
Posted By - Ko Ko - April 13, 2009
Profile of Koo Hye-sun
Boys Before Flowers - drama
Articles in English of Koo Hye-sun
Koo Hye-seon Talks About her Role in "Boys Over Flowers"
Koo Hye-seon Debuts as Writer
Gu Hye Sun (http://k-popped.com/2009/04/gu-hye-sun.html)
မင်းသမီး Koo Hye-sun
Korean Actress Koo Hye-sun (25)
မင်းသမီး Koo Hye-sun (25 )ကို 1984-Nov-09 မှာ တောင် ကိုးရီးယား နိုင်ငံ Seoul မြို့မှာ မွေးဖွား ခဲ့ ပါတယ်။ မိသားစု ဖြစ်တဲ့ အဖေ၊ အမေ၊ အမ တို့နဲ့ အတူ နေထိုင် ပြီး အိမ်ထောင် မရှိ လူလွတ် ဖြစ် ပါတယ်။ ပညာ အရည် အချင်း မှာ Seoul Art College မှ ဘွဲ့ရ တစ်ဦး ဖြစ် ပါတယ်။
Koo Hye-sun ဟာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် မှာ ကွန်ပျူတာ ကြော်ငြာ တစ်ခု ရိုက် ရာက နေ အနုပညာ လောက ကို ခြေချ ခဲ့ ပါတယ်။
၄င်းနောက် ရုပ်ရှင် နဲ့ ဇာတ်လမ်း တွဲတွေ ဆက်တိုက် ရိုက်လာ ခဲ့ပြီး တဖြေးဖြေး နာမည် တက်လာ ခဲံ ပါတယ်။
Koo Hye-sun as lead actress in
drama Boys 'Before Flowers'
မကြာသေးမှိ က ပြလို့ ပြီးသွား တဲ့ နာမည် ကျော် Boys Before Flowers ဇာတ်လမ်း တွဲမှာ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး အဖြစ် ပါဝင် ခဲ့တဲ့ အခါ မှာတော့ လျှမ်းလျှမ်း တောက် နာမည် ကျော် မင်းသမီး တစ်လက် ဖြစ်လာ ခဲ့ ပါတယ်။
မင်းသမီး ဟာ စွယ်စုံ ရသူ တစ်ဦး ဖြစ် ပါတယ်။ Boys Before Flowers ရိုက်နေဆဲ ကာလ မှာပဲ Tango လို့ အမည် ရှိတဲ့ novel တစ်အုပ် ရေးသား ထုတ်ဝေ ခဲ့ ပါတယ်။ စာအုပ် မျက်နှာဖုံး design ကို ကိုယ်တိုင် ဆွဲ ပါတယ်။
လဝက် အတွင်း မှာ အုပ်ရေ ၃ သောင်း စံချိန် တင် ရောင်းချ ခဲ့ရ ပြီး ယခု ရောင်း မလောက် လို့ ၇ ကြိမ်မြောက် ပုံနှိပ် နေရ ပါတယ်။
Korean actress Koo Hye-sun
မကြာ ခင် ကလည်း The Cheerful Caretaker လို့ အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ကားတို လေး တစ်ကား ကို ဒါရိုက်တာ လုပ်ပြီး ထုပ်ဝေ ခဲ့ ပါတယ်။ ဒီ ဇာတ်လမ်း တိုရဲ့ theme song ကို ကိုယ်တိုင် ရေးစပ် ပါတယ်။ Panio လည်း ကောင်းကောင်း တီးတတ် ပါတယ်။
သူ ခေါင်ဆောင် မင်းသမီး အဖြစ် ပါဝင် ခဲ့တဲ့ Pure 19 (KBS1, 2006) ဇာတ်လမ်းတွဲ ရဲ့ ဇာတ်ဝင် သီချင်း (themes song) ကိုလည်း ကိုယ်တိုင် ဆိုခဲ့ ပါတယ်။
SBS Drama Award (2007) ရဲ့ အခမ်း အနားမှူး (MC) အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ ပါတယ်၊ ဒီ အလုပ် ကလည်း လူတိုင်း လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ် မဟုတ် ပါဘူး။
ဒီ ခလေးမ ဟာ အခုမှ အသက် ၂၅ နှစ် ရှိပါ သေးတယ်။ နောက် ဘာတွေ များ ဆက်လုပ် ဦး မလဲ မသိပါ။ Koo Hye-sun ရဲ့ profile မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ် ပါတယ်။
She was the MC of the popular music program Inkigayo
on SBS (2006-2007).
She sang the theme song for her drama Pure 19.
Tags: korean actress | korean drama | korean news | korea
Summary - Korean Koo Hye-seon Gu made her debut in 2002 inaCF advertising some computers PC. She has since addedalong string of dramas to her credit, hosted music program SBS Inkigayo (2006 - 2007), hosted the SBS Drama Award 2007 and sang the theme song for her drama Pure 19. Best known for her lead role inavery popular drama [Boys Before Flowers] as the spunky Geum Jan-di. Koo Hye-seon can sing, draw and has publishedanovel named [Tango]. She also illustrated the book cover and the book comes with around 40 of her own illustrations. The book sold over 30 thousand copies within 15 days and is in the 7th printing. Now that is not all, she has even written and directedashort film entitled [The Cheerful Caretaker]. Koo who can hold her own on the piano, also wrote the theme song for her short film. She is only 25 and is so talented, what will be she doing in the future one have to wonder.
End of Article - Actress Koo Hye-sun
roxinnie February 7, 2010 - 6:25 pm
hello!koo hye sun...i really like you, the way you act and your beautiful smile,your so pretty. Im one of your avid fan.here in the philippines we all love you.
ellaatienza2005@yahoo.com January 30, 2010 - 4:46 am
you are nice lady, very inspiring to our teens here in the philippines, we hope to see you here. god bless always
BOFLOVER January 23, 2010 - 4:02 am
ahnyeong haseyo! saranghae! i hope u can visit the Philippines!
maythazinshin November 18, 2009 - 4:42 am
အမကို အရမ်း ကြိုက်ပါ တယ် ... တောသူမဇာတ်ကား ကတည်းက ကြိုက်တာပါ ........ f4 ဇာတ်ကား မှာ အရမ်း ကြိုက်ပါ တယ် အမကို ထာဝရ အား ပေး နေမှာ ပါ ........................
anthony September 22, 2009 - 10:43 pm
Hope even in My Dreams I can See You....
anthony September 22, 2009 - 10:41 pm
I Like The Way So Smile...
anthony September 22, 2009 - 10:40 pm
anthony September 22, 2009 - 10:39 pm
yelay August 26, 2009 - 2:49 pm
တောသူမဇာတ်ကား ထဲက မမကို အရမ်း ပဲ ချစ်သွား တာပါ ဗျာ..
shirlene d. juntilo July 30, 2009 - 11:28 pm
hi?koo hye sun how are you?you know i like you?because you are very pretty,talented,and you are so very cute?i hope you visit in phillipines.love you?so much i m your number one fans??in phill.muahhhhh?
ayenandar July 15, 2009 - 4:34 am
အ မ က အရမ်လှတာပ`ချစ်ဖို.လည်းကောင်း တယ်
nnmonhtwe282 June 14, 2009 - 10:38 pm
အမ ရဲ့ ဇာတ်ကား အရမ်း ကြည့်ကောင်း တယ် နော် အမ က အရမ်း လှတယ်
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/450/actress-koo-hye-sun
Rendering time 0.0224 sec